होमपेज / शुक्रबार / गडबड छ सबैतिर
गडबड छ सबैतिर	16 May 2013 बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
'जोसुकैले थाहा पाओस्, बालै भएन नि! दिस इज माई लाइफ।' यस्ता वाक्यहरू बार, रेस्टुरेन्ट, चियापसल, कलेज, जताततै सुन्न पाइन्छन् हिजोआज। अलिकति पाका मानिसहरू भन्छन्, 'के भएको हो नया“ जमानाको पुस्तालाई? पहिले छोराहरू बौलाएर हिँड्थे, अहिले छोरीहरू पनि बौलाउन थालेका छन्। गडबड छ सबैतिर।' नया“ नेपाली पुस्ताका युवतीहरू दुर्व्यसनमा फसेका छन्। कतिका लागि जीवनमा कुनै 'च्वाइस' बचेको छैन भने कतिका लागि नशाविना जीवनको सार नै बा“की रह“दैन। यसपटक सजना बराल यसैमा केन्द्रित छिन्। उनले नयाँ पुस्ता फसेको भुमरीको नालीबेली उतारेकी छिन्। टिनएजर छोराहरूको खल्ती छाम्ने अभिभावकले अब छोरीमाथि पनि निगरानी गर्ने बेला भएको छ। लागुपदार्थ दुर्व्यसनमा फस्ने युवतीको संख्या भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै सल्किँदै गएको छ। बाबुआमाको पिठ्यूँपछाडि चुरोट पिउने, पानपराग, गुट्खा, खैनी, सुर्ती, हुक्का, गाँजा, चरेस, ब्राउन/ह्वाइट सुगर, हेरोइन, जाँड, रक्सी, मर्फिन, प्रोक्सिबोन, नाइट्रोसन, फेन्सिडाइल आदि लागुऔषध सेवन गर्ने युवतीका संख्या अपत्यारिलो ढंगले बढिरहेको छ। छोराको मामिलामा अभिभावक बढी चनाखो हुने तर छोरीमाथि खासै शंका नगर्ने भएकाले यो समस्या भूमिगत अवस्थामै व्यापक बनेको छ। काठमाडौँ, नेपालटारकी १९ वर्षीया मोनिकाको मुख कहिल्यै खाली हुँदैन। उनी जतिखेर पनि परागको स्वाद लिइरहेकी हुन्छिन्। पढाइको सिलसिलामा पाँच वर्षअघि भारत पुगेकी उनले त्यही बेलादेखि पराग खान सिकेकी हुन्। साथीभाइले मुख मिठ्याउँदै चुसेको देखेपछि उनलाई पनि खाऊँ–खाऊँ लागेको थियो। 'पहिलोचोटि खाँदा घाँटी टट्याएर झन्डै मरिनँ,' उनी अनुभव सुनाउँछिन्, 'त्यसपछि अलि लाइट खालका पराग– स्विटी, पिंकी, मधु आदि खान थालेँ। बिस्तारै कडा चुनासहितको पराग पनि खान सक्ने भएँ। अहिले त यो नखाए छटपटी भएर बौलाउँछु।' ललितपुरस्थित मानसिक अस्पतालका मनोचिकित्सक डा. रवि शाक्यका अनुसार मानिसको चेतना (कन्ससनेस) को स्तर घटाउने वा गडबड गराउने तत्वहरूलाई ड्रग्स अर्थात् लागुपदार्थ भनिन्छ। त्यस्ता पदार्थले दिमागमा रासायनिक परिवर्तन ल्याउँछन्। यसका कारण प्रयोगकर्तालाई झुम्म हुने, भोक–प्यास नलाग्ने र भ्रम पैदा हुने हुन्छ। ड्रग्सलाई दुई भागमा विभाजित गरिएको छ– कानुनी र गैरकानुनी लागुपदार्थ। चिया, कफी, सुपारी, पानपराग, खैनी, सुर्ती, गुट्खा, मधु, चुरोट, जाँड र रक्सीलाई नेपालमा कानुनी लागुपदार्थअन्तर्गत राखिएको छ। तिनको प्रयोग गर्न कुनै रोकतोक वा बन्देज छैन। जसले जुनसुकै बेला यी पदार्थहरू खुलेआम बेचबिखन र सेवन गर्न पाउँछन्। सस्तो र सर्वसुलभ रूपमै पाइने हुँदा यी पदार्थ अचेल महिला वा युवतीमाझ पनि निकै चर्चित हुन थालेको भक्तपुरस्थित 'अल्कोहलिक रिकभरिङ टिम'की शोभा वज्राचार्यले बताइन्।बा–आमाकै अगाडि सुपारी वा पान–पराग खान छोरीहरूले संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन। 'मधु मेरो फेभरेट हो,' बालाजुकी सम्झना सुब्बाले भनिन्, 'एक रुपिँयामै आउँछ। दिनको कम्तीमा २०/२५ प्याकेट खान्छु।' स्कुल पढ्दा उनलाई साथीभाइले खाऊ भनेर एक–दुई फाँको दिन्थे। अलि–अलि गर्दागर्दै उनले दिनको दुईतीन प्याकेट भ्याउन थालिन्। 'पछि मात्रा बढ्दै गयो,' उनले भनिन्, 'अब त छोड्नै नसक्ने भइसकेँ।' कतिपय महिला सुपारी, खैनी वा चुरोटका अम्मली हुन्छन्। बिँडी त हाम्रा हजुरआमाका पालादेखि नै खाने गरिएको छ। वृद्धा महिलाले धुवाँ उडाइरहेको थुप्रै देखेका छौँ हामीले। अहिले तिनै हजुरआमाका छोरी–नातिनिहरू पनि चुरोट सल्काउन पल्केका छन्। साथीभाइको लहैलहैमा लागेर वा देखासिकीका कारण युवतीहरूमाझ चुरोट आकर्षण भव्य बनेको ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित इन्फेक्टेड एन्ड क्राइसिस केयर रिह्याबका कार्यकारी निर्देशक सुरज गौतमले बताए। बानेश्वरकी मिनाले कक्षा सातमा पढ्दादेखि नै चुरोट तान्न सुरु गरेकी थिइन्। युनिक बन्न रुचाउने उनी कुन स्टाइलले चुरोट समात्दा 'बबाल' देखिन्छ भनेर ऐना हेर्दै कल्पनामा डुब्थिन्। एकदिन साथीहरूले जक्सनमा लगेपछि उनको सपना साकार भयो। साँच्ची नै चुरोट उनको हातमा पर्‍यो। र, ओठमा पनि पुग्यो। दिनको दुई खिल्लीबाट पिउन सुरु गरेकी उनले हिजोआज दुई बट्टासम्म भ्याउँछिन् रे। 'जतिबेला पनि तलतल लाग्छ, के गर्नु?' उनले भनिन्।डा. रवि शाक्यका अनुसार नेपालमा अत्यधिक प्रयोग हुने लागुपदार्थ रक्सी हो। महिलाहरूले ज्यादा सेवन गर्ने लागुपदार्थ पनि रक्सी नै भएको अनुसन्धानहरूले पत्ता लगाएका छन्। लोकल ठर्रा नेपाली समाजमा बग्रेल्ती पाइन्छन् भने कतिपय जातजातिलाई संस्कारले नै रक्सी पिउन छुट दिएको छ। ग्रामीण भेगका महिलाहरू छ्याङ, तोङ्बा वा जाँडलाई महीसरह घुट्क्याउने गर्छन्। शहरबजारका महिला वा युवतीले चाहिँ रमाइलोका लागि बियर, वाइन, भोड्का वा रमलाई ठाडो घाँटी लगाउन थालेका छन्। कतिपयले दुःख, पिर, पारिवारिक किचलो आदि भुलाउन रक्सी खाने गर्छन्। कोही चाहिँ समाजमा भिज्न वा साथीभाइसामु आफूलाई बराबर देखाउन पनि रक्सी खानैपर्छ भन्ने भ्रममा छन्। अधिकांश युवतीले साथीभाइ वा ब्वाईफ्रेन्डको कर–बलले अल्कोहल(मदिरा) प्रयोग गर्ने नेपाल युथ रिह्याबिलिटेसन सेन्टरका डाइरेक्टर रिक्सन वज्राचार्यको अनुभव छ। विराटनगरकी ३६ वर्षीया शान्ता केसीलाई राति खाना खाएपछि चार/पाँच पेग भोड्का नपिए हिजोआज निद्रै लाग्दैन रे। 'सबले धोका दिएका छन् मलाई,' उनले फिल्मी डाइलग बोले जसरी भनिन्, 'यही एउटा रक्सीले मात्रै दिएको छैन।' कुनै बेला विवाहको आश देखाउने प्रेमीले उनलाई लोप्पा ख्वाएको थियो। 'रक्सी खाएर झ्याप भएपछि त्यसलाई साफ थर्काउँछु भनेर दुई बोतल बियर खाएकी थिएँ त्यतिबेला,' उनी सम्झन्छिन्, 'तर, न त्यसलाई थर्काउन सकेँ न त रक्सी नै छोड्न सकेँ।' पछिल्लो समय श्रीमान्ले सौता हालेपछि शान्तालाई संसारमा रक्सीजति विश्वासिलो केही लाग्दैन रे। 'म यो रक्सीलाई कहिल्यै धोका दिनेछैन,' उनले भनिन्। हार्ड ड्रग्सको बिगबिगीसुपारी, पराग, खैनी, चुरोट, रक्सी हुँदै धेरै किशोरीहरू हार्ड ड्रग्स वा गैरकानुनी लागुपदार्थको कुलतमा फसिरहेका छन्। तर, हार्ड ड्रग्स सेवन गर्नेहरू ठ्याक्कै यस्तै क्रोनोलजिकल अर्डरमा लागुपदार्थ सेवन गर्दै उकालो लाग्छन् भन्ने छैन। काठमाडौँ, जोरपाटीस्थित सोबर रिकभरिङ टि्रटमेन्ट एन्ड रिह्याबिलिटेसन सेन्टरका निर्देशक टी वाङ्डूका अनुसार अधिकांश लागुऔषध प्रयोगकर्ता चुरोट हुँदै कडा खालका लागुपदार्थ सेवन गर्न थाल्छन्। आफूलाई एड्भेन्चरस वा फरक देखाउन खोज्ने र नेगेटिभ कुराबाट छिट्टै प्रभावित हुने युवतीहरूले यो बाटो अँगालेको उनले देखेका छन्। साथीभाइ, ब्वाईफ्रेन्ड र परिवारका कोही सदस्य दुर्व्यसनी छन् भने युवतीहरूमा त्यो लत सर्ने सम्भावना ज्यादै उच्च हुने उनको अनुभव छ। डा. शाक्य भन्छन्, 'केटीहरू चाँडै ड्रग्स–डिपेन्डेन्ट (लागुऔषधमा निर्भर) हुन्छन् र थोरै डोजले पनि उनीहरूलाई बिरामी (एडिक्ट) बनाउँछ।' सुनीताका श्रीमान् लागुऔषध प्रयोगकर्ता थिए। उनको घर बिरामीहरूको अड्डा नै थियो। विवाह गरेको चारपाँच महिनासम्म सुनीता गाँजाको नजिक परिनन्। तर, श्रीमान् र उनका साथी दिनभरि लट्ठ भएको हेर्दाहेर्दै उनलाई पनि गाँजाले तानिछाड्यो। 'श्रीमान्ले नै खान सिकाइदिनुभयो,' उनले भनिन्, 'सुरुमा एक सर्को तान्दा ननस्टप खोकी लाग्यो। उहाँले फेरि तान भन्नुभयो। यस्तो गर्दा गर्दै दुईचार खिल्ली सकियो। नशा चढेपछि एउटै मान्छेलाई दुइटा देख्न थालेँ। हातखुट्टा लल्याकलुलुक भयो।' त्यसपछि उनले दैनिक गाँजा तान्न थालिन्। गाँजाबाट हेरोइन, अफिम र ब्राउन सुगर सेवन गर्नेदेखि इन्जेक्सनसमेत प्रयोग गरिन्। सासुससुरा बेलायतमा भएकाले उनीहरूलाई पैसाको समस्या थिएन। तर, एकदिन सुनीताको जीवनमा कस्तो वज्रपात आइपर्‍यो भने 'सिक पिरियड'मा उनका श्रीमान्ले मुखबाट सेतो फिँज निकाले। हस्पिटल नपुर्‍याउँदै उनको मृत्यु भयो। काजक्रिया सकाउनासाथ सुनीतालाई पनि रिह्याब (सुधार केन्द्र) मा हालियो। एक वर्षको टि्रटमेन्टपछि उनी हालै बाहिर निस्केकी छन्। मेडिकल साइन्सले दुर्व्यसनमा फस्नुको मूलभूत कारण– वंशानुगत, मानसिक र सामाजिक पक्षलाई मान्ने डा. शाक्यको भनाइ छ। 'परिवारको कोही सदस्य लागुऔषध प्रयोग गर्छन् भने उसका सन्तान वा आफन्तलाई पनि त्यो लत सर्न सक्छ,' उनले भने, 'मानिसमा कुनै किसिमको मानसिक रोग वा तनाव छ भने उसलाई ड्रग्स सेवन गर्दा आनन्द मिलेजस्तो हुन्छ। तनावबाट छुट्कारा पाएजस्तो लाग्छ। मन हल्का र शान्त भएको भान हुन्छ। त्यसपछि ऊ झन्झन् लागुऔषध प्रयोग गरिरहन्छ। सामाजिक फ्याक्टरले पनि मानिसलाई कुलतमा फसाउँछन्। विशेषगरी हाम्रो जस्तो समाज जहाँ औषधी, मदिरा आदिको खुलेआम बिक्रीवितरण हुन्छ, त्यस्तो खुकुलो समाजका युवा वर्गलाई कुलतमा फस्न साह्रै सजिलो हुन्छ।'महिला दुर्व्यसनीको संख्या नेपालमा ठ्याक्कै यति प्रतिशत महिला दुर्व्यसनीमा फसेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन। यस विषयमा सरकार, सम्बन्धित निकाय र महिलाका लागि काम गर्ने संघसस्थाले कुनै चासो देखाएका छैनन्। सन् २००६ मा तथ्यांक विभागले गरेको सर्भेक्षणले नेपालमा दुर्व्यसनीमध्ये जम्मा दुई प्रतिशत महिलाले हार्ड ड्रग्स प्रयोग गर्ने फेला पारेको थियो। तर, दुई लाख चानचुन लागुऔषध प्रयोगकर्तामध्ये ४० देखि ५० हजार महिलाको संख्या भएको अनुमान छ। दुव्यर्सनीमा फस्ने अधिकांश महिला/युवतीको उमेर १५ देखि ४५ वर्ष हुने डा. रविले बताए। ठ्याक्कै तथ्यांक नभए पनि दुर्व्यसनमा फसेको महिलाको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। यस्तो हुनुमा नेपाली समाज, यहाँका मानिसका मानसिकता, जनचेतना र नियमकानुनको अभाव, खुला सिमाना र कसको कोसँग संगत छ भन्ने कुरा प्रमुख कारण भएको जानकारहरू बताउँछन्। 'अधिकांश युवतीलाई तिनका ब्वाईफ्रेन्डले कुलतमा फसाएका छन्,' डा. शाक्यले भने, 'कोही अनुभव गर्ने निहुँमा फसिरहेका छन्। कसैलाई ड्रग्स सेवन गर्‍यो भने स्लिम भइन्छ, इनर्जी आउँछ, पढाइमा ध्यान जान्छ, स्वर बोल्ड वा हस्की हुन्छ भन्ने भ्रम छ। यिनै कारणले महिला दुर्व्यसनीको संख्या थपिएको हो।''मेरा ग्रुपका सबै साथी स्लिम थिए,' २१ वर्षीया मनिता थापाले रिज्ला कागजमा ब्राउन सुगर बेरेर तान्नुको कारण बताएकी छन्, 'ममात्रै मोटी! मलाई ब्वाईफ्रेन्डले माल (ब्राउन सुगर) तान्यो भने फिगर बन्छ भन्यो। उसँगै मागेर दुईचार सर्को लगाएँ। पछि उसले अरु युजरहरू चिनाइदियो। जक्सनमा हुँदा बुच (रक्सी), ज्वाइन (गाँजा), पाइप (सिगरेट), सामान (इन्जेक्सन) सबथोक चलाउँथेँ।' बिस्तारै उनको फिगर यसरी मेन्टेन भयो कि ६४ केजीबाट उनी ३८ मा झरिन् रे। हाल उनी काठमाडौँस्थित सुधार केन्द्रमा छिन्। 'टिनएजका छोरीहरू उत्ताउलो त हुने नै भए' भन्दै अभिभावकले छोरीहरूलाई छाडा छोडिरहेका हुन्छन्। कोही भने कडाइ गर्ने बहानामा छोरीमाथि खरो उत्रिएका हुन्छन्। उनीहरूलाई हल न चलको अवस्थामा राख्छन्। अभिभावकका यी दुवै प्रवृत्तिले छोरीहरूमा 'यसै भएन, उसै भएन' भन्ने मानसिकता सिर्जना हुन सक्ने सोबर रिकभरिङका वाङ्डूले बताए। उनको सेन्टरमा हाल २० जना युवती उपचारार्थ भर्ना भएका छन्। चौध वर्षका किशोरीदेखि ६५ वर्षका वृद्धालाई समेत उनी रेखदेख र पुनःस्थापित गराउन प्रयासरत छन्। 'अधिकांश युवती मध्यम वर्गीय परिवारका छन्,' उनले भने, 'स्कुल र प्लस टू लेभलका किशोरी हामीकहाँ धेरै आउँछन्।' नेपाल युथ रिह्याबका रिक्सन वज्राचार्यका अनुसार महिला दुव्यर्सनीको संख्या पत्ता लगाउन गाह्रो हुनुको थप कारण चाहिँ महिलाहरूले बोल्न र आफू एडिक्ट हुँ भनी स्विकार्नै नचाहनु हो। 'सर्भे नै गरे पनि कोही महिलाले म कोकिन खान्छु, इन्जेक्सन प्रयोग गर्छु भनेर कदापि भन्दैनन्,' उनले भने, 'न त उनीहरू सुधार केन्द्रमा आउन नै रुचाउँछन्। परिवारले पनि उनीहरूलाई बरु घरमै कुटेर, पिटेर वा थुनेर राख्छन् तर सुधार केन्द्र ल्याउने चेष्टा गर्दैनन्। छोरीको विवाह गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने डर उसका बाआमालाई हुन्छ।' दुव्यर्सनका प्रभाव लागुऔषध प्रयोग गर्नासाथ कोही पनि त्यसको अम्मली बनिहाल्दैन। तर, जब त्यो पदार्थ उसको आवश्यकता बन्न थाल्छ, त्यसपछि ऊ एडिक्ट वा बिरामी हुन्छ। यसलाई चिकित्सकहरू रोगका रूपमा लिन्छन्। सुरु गर्दा जुन अर्थमा प्रयोग गरे पनि दुर्व्यसनीको रोग लागिसकेपछि ती पदार्थ बिरामीका आवश्यकता बन्छन्। तिनको प्रयोग नगरे उनीहरू 'सिक' हुन्छन्, जसको कारण जिउ दुख्ने, बोल्न, हाँस्न मन नलाग्ने, रिस उठ्ने, खान मन नलाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, नाकबाट सिँगान बगिरहने आदि हुन्छन्।ब्राउन सुगर किन्न काठमाडौँबाट वीरगञ्जको रक्सौल पुगेकी १८ वर्षीया सबितालाई प्रहरीले रंगेहात समातेको थियो। प्रहरीले उनको गाला चट्काएपछि उनले पनि प्रहरीको घाँटी अठ्याएकी थिइन्। फलस्वरूप, प्रहरीको सुनको सिक्री लुट्न खोजेको आरोपसमेत लगाई उनलाई छ महिना खोरमा थुनियो। दुव्यर्सनले मानिसलाई अपराधतर्फ उन्मुख गराउने उनको कथाले प्रस्ट्याउँछ।सिक पिरियडमा प्रयोगकर्ताको चेतना स्तर न्यून हुने सोबर रिकभरिङका वाङ्डूले बताए। त्यस्तो अवस्थामा एक त महिलाको अस्तित्व लुटिने खतरा हुन्छ। अर्को कुरा ड्रग्सकै लागि शरीर बेच्न वा सेक्स टे्रड गर्न पनि महिला पछि पर्दैनन्। ड्रग्स नखाँदाको पीडा दशतिरबाट सियोले घोपेभन्दा ज्यादा हुने वाङ्डूले बताए। उनी आफैँ भूपूप्रयोगकर्ता पनि हुन्। एडिक्ट युवतीहरू ड्रग्सका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। एकअर्कासँग सुई साटासाट गर्छन्। अन्ततः एचआइभी/एड्स, हेपाटाइटिस बी/सी, सिफिलिस, क्यान्सर जस्ता घातक रोगका शिकार बन्न पुग्छन्। डा. रवि शाक्यका अनुसार हार्ड ड्रग्सभन्दा चुरोटका कारण रोग लागेकाहरूको उपचार गराउन गाह्रो हुन्छ।लागु पदार्थको सेवनले महिलाको प्रजनन स्वास्थमा पनि गहिरो प्रभाव पार्ने उनले बताए। 'कानुनी वा गैरकानुनी दुवै खालका ड्रग्सले महिलाको बच्चा जन्माउने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ,' उनले भने, 'कि त उनले बच्चा जन्माउनै सक्दिनन्। जन्माइहाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्मिँदैन।' झिनामसिना लतका रूपमा लिइने मधु, पानपराग, खैनी, गुट्खा आदिको सेवनले महिलाको स्वास्थ्यमा घना असर पार्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। 'ती पदार्थमा निकोटिन प्रयोग गरिएका हुन्छन्,' डा. शाक्य भन्छन्, 'लामो समयसम्म खैनी खानेको गाला कुहिने, भ्वाङ पर्ने वा क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ। चियासमेत धेरै पिउनु हुँदैन। त्यसले पनि विशेषतः महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।' 'सानीआमाको संगतले ज्वाइन तानियो'म त्यतिबेला ८ कक्षामा पढ्थेँ। मामाघर गएका बेला राति ११ बजेतिर सानीआमाले मलाई बैठक कोठामा बोलाइन्। मामाहरू पनि त्यहीँ थिए। सबैको हातमा सिगरेट थियो। सानीआमाले मलाई पनि एक सर्को तान्न भनिन्। मैले नाइँ भनिनँ। सूर्य लाइटको खोलभित्र ज्वाइन (गाँजा) बेरिएको थियो। एक खिल्ली सिध्याएपछि मेरा आँखा झिमझिम भए। हाँस्न मन लाग्यो। मज्जा पो हुँदो रै'छ भनेर अर्को खिल्ली पनि खाएँ। अर्को दिनदेखि दिनमा दुई पल्ट तान्न थालेँ। पछि त बानी लागिहाल्यो। गाँजापछि मैले सामान (ब्राउन सुगर), क्रयाक (ह्वाइट सुगर) र ट्याब (ट्याबलेट) खान थालेँ। बाआमा जापानमा भएकाले म होस्टेलमा बस्थेँ। साथीहरूले मलाई होस्टलमै ड्रग्स ल्याइदिन्थे। बिस्तारै मेरो पढाइ ध्वस्त हुन थाल्यो। ९ कक्षामा फेल भएँ। त्यहीबेला ब्वाईफ्रेन्डले धोका दियो। बा–आमाको पनि डिभोर्स भयो। मलाई त्यतिबेलासम्म डिल आउन थालिसकेको थियो। नेपालगञ्जको डिलरसँग मेरो कन्ट्याक्ट थियो। मैले आइएमईबाट पैसा पठाएपछि उसले बसबाट प्याक (हेरोइन) पठाइदिन्थ्यो। नयाँ बसपार्कमा लिन जानुपर्थ्यो। एक ग्रामको १८ सय रुपैयाँ पर्थ्यो। म २५ ग्रामसम्म मगाउँथेँ। सुरुमा रमाइलोका लागि प्रयोग गरेको ड्रग्स पछि मेरो टेन्सन भुलाउने सहारा बन्यो। शरीरको आवश्यकता बनेको थियो। त्यो खाएन भने थररर काम्न थाल्थेँ, लोसे हुन्थेँ। खाएपछि चाहिँ जोश आउँथ्यो। काम गर्न मन लाग्थ्यो, पढ्न मन लाग्थ्यो। बीचमा मैले ड्रग्स छोड्ने प्रयास गरेकी थिएँ। दुई हप्ता जति नखाई पनि बसेँ। तर, त्यसभन्दा बढी मैले धैर्य गर्न सकिनँ। एकफेर छोडेर खान थालेपछि झनै डोज बढ्यो। स्कुलमा सबैले थाहा पाए। र, स्कुलबाट निकालिएँ। तर, सामान (हेरोइन) छोड्न सकिनँ। साढे दुई महिनाअघिको कुरा हो, एकदिन म थापागाउँस्थित एक निर्माणाधीन भवनमा साथीहरूसँग बसेर डिल लिँदै थिएँ। सातआठ जना मान्छे आए। झ्याम्झुम समाते र कुट्न थाले। उनीहरू इन्टरपोलका पुलिस रहेछन्। मसँग जम्मा दुई ग्राम बाँकी थियो। अरू पनि निकाल् भन्दै गालैगालामा चड्काए। त्यसपछि भ्यानमा हालेर थानामा लगे। मैले त्यहीँबाट ममीलाई फोन गरेर सबैथोक सुनाएँ। ममीले बल्ल चाल पाउनुभयो। रुँदै–कराउँदै थाना आइपुग्नुभयो। त्यहाँबाट मलाई सिधै सुधार केन्द्र लगियो। शर्मिला (नाम परिवर्तन) 'चार वर्षमा सात पटक रिह्याबमा'ब्वाईफ्रेन्डले धोका दिएपछि बेहाल भएकी थिएँ। दिमाग अशान्त थियो। साथीहरूले गोटी (ट्याबलेट) खाएपछि सारा टेन्सन खलास हुन्छ भने। मलाई ट्राई गर्न मन लाग्यो। त्यतिबेला म १४/१५ वर्षकी थिएँ। हङकङमा बस्थेँ। मेरा चारपाँच जना साथी माल तान्थे। उनीहरूको संगतले मलाई पनि गोटीबाट सिधै माल तान्ने बनायो। त्यो खाएपछि आनन्द हुन्थ्यो। आफ्नै धुनमा झुल्दै बस्यो, कसैको याद पनि नआउने, रिल्याक्स्ड फिल हुन्थ्यो। दिनमा एकपटक तान्ने मैले बिस्तारै दुई, तीन गर्दै डोज बढाउँदै गएँ। झ्याप भएका बेला साथीभाइको घर वा पार्कमै रात कटाउँथे। मेरो चर्तिकला परिवारले एक वर्षसम्म पत्तो पाएन। एकदिन घरमै हुँदा सिक भएँ। माल किन्ने पैसा थिएन। कोसँग मागौँ, के गरौँ, कहाँ जाऊँ भयो। जिउ दुखेर लास्टै भएपछि बरु भन्दिन्छु भनेर आमालाई 'म माल तान्छु, पैसा दिनुस्' भनेँ। आमा छक्क पर्नुभयो। नपत्याएर 'मेरै अगाडि खा' भन्दै पैसा दिनुभयो। मैले घरमै डिलर बोलाएर किनेँ र खाएँ। आमा डाँको छाडेर रुन थाल्नुभयो। त्यसपछिका चार वर्ष मैले घरपरिवारलाई सताउनु सताएँ। जतिपल्ट रिह्याब लगे पनि मेरो अवस्था सुध्रिएन। भित्र हुँदा अब खान छोड्दिन्छु भन्थेँ, बाहिर निस्केपछि जताततै ड्रग्समात्रै देख्थेँ। हङकङमा त पार्कैभरि डिलरहरू बसेका हुन्छन्। माल देखेपछि खाउँ कि–खाउँ कि लागिहाल्ने! हङकङका डिलरले चारतिर सुराकी राखेका हुन्थे र पुलिस देख्नासाथ उनीहरू ठाउँको ठाउँ गायब भइदिन्थे। चार वर्षमा सात पटक रिह्याब बसेँ म। एकचोटि त रिह्याब जानुभन्दा ओभरडोज लिएर मर्दिम जस्तो लागेको थियो। ट्राई पनि गरेँ। तर ओडी (ओभरडोज) भएको बेला साथीहरूले हल्लाएर जबर्जस्ती उठाइहाल्थे। मर्दै मरिनँ। अहिले म काठमाडौँको एक सुधार केन्द्रमा छु। अब चाहिँ मेरो होश खुलेको छ। जाबो एउटा केटाको कारणले जिन्दगी नै बिगारेछु मैले। पश्चात्ताप लागेको छ। त्यहाँबाट निस्केपछि कलेज ज्वाइन गर्छु।क्रिस्मा गुरुङ(नाम परिवर्तन)	Tweet Leaveacomment Message *
पोखरामा 'लभ एन्ड लस्ट'काठमाडौँको सुन्धारामा मुख्य आउटलेट रहेको 'लभ एन्ड लस्ट'ले पोखराको लेकसाइडमा पनि नयाँ आउटलेट खोलेको छ। 'लभ एन्ड लस्ट' सेक्स टोय बिक्री गर्ने नेपाली कम्पनी हो। विश्वबजारमा पाइने विभिन्न भेराइटीका कृत्रिम...	प्रशान्तको सुरमा झुम्यो पोखराआइतवार पोखरा रंगशाला खचाखच भरिएको थियो। सन्दर्भ थियो– 'ल्होछार म्युजिकल फेस्टिभल।' हजारौँ पोखरेली संगीतमा झुम्न तम्तयार थिए। जब इन्डियन आइडल प्रशान्त तामाङ स्टेजमा देखापरे, तालीको गडगडाहटले उनको स्वागत गरियो।	'अर्को खट्को काटियो'सत्यमोहन जोशी (९६), संस्कृतिविद्खाना खाएर अखबार किन्न भनेर पसल गएको थिएँ। फर्केर आउँदा 'लौ लौ भुइँचालो गयो' भन्न थाले सबै जना। फनफनी घुमाउन थाल्यो। दौडेर आउने कुरो भएन। दौडनु हुन्न...	व्यङ्ग्य : कविजीकवि हृदयमा अपर्झट कविता फुर्योई। कविजीले फेसबुक सम्भि्कए। विदेश बस्ने भेनाले पठाइदिएको ल्यापटप। छिमेकीको सद्भावले पाएको फ्री वाइफाईको स्मरणले कविजीको दिमाग झंकृत भयो। अचेल ल्यापटप र वाइफाईको संयोगले कविजीको कविता...	हिट हुन हटगीत राम्रो गाउनु गायिकाका लागि अनिवार्य कुरा भइहाल्यो। राम्रो स्वर भएका गायिका जति हिट भए पनि स्टुडियोमै सीमित हुन्छन्। यो बेलै त्यस्तै छ कि 'कमाइधमाइ पनि अलि अलि गरौँ' भन्नेका...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी समाउँदै हिँड्यो। प्रहरीका यस्ता काम–कारबाहीलाई ...कस्मेटिक', ...सस्तो प्रचारबाजी' भनेर टिप्पणी र आलोचना पनि गरियो।...	जोगी ड्राइभरदेशभरिबाट काठमाडौँ भित्रिएका यात्रुबाहक बसको घुइँचो हुन्छ, हरेक बिहान नयाँ बसपार्कमा। एक बिहान एउटा पहेँलो बसलाई पार्किङ गराउँदै गर्दा केही मान्छेले घेरेर पार्किङ गराउनै मुश्किल पारिरहेका थिए। उनीहरू ड्राइभरतिर आँखा...	चर्चित कथा छान्दैमा के हुन्छ?पछिल्लो समय पत्रपत्रिकामा एउटा फिल्म छाइरहेको छ। अरुण प्रधानद्वारा निर्देशित फिल्म '१२ नेपाली एक चिहान' यसमा उठाइएको विषयवस्तुका कारण मात्रै होइन, सेन्सर प्रक्रियामा भोगेको झमेलाले पनि चर्चामा छ। सेन्सरले सुरुमा...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...